भीष्म र युधिष्ठिरको अन्तिम कुराकानीः महाभारत कथा - LiveMandu
भीष्म र युधिष्ठिरको अन्तिम कुराकानीः महाभारत कथा
in exclusive, शास्त्रार्थ
कुरुक्षेत्रको युद्ध सकिएको छ, भीष्म पितामह वाणहरुको शैयामा लडिरहेका छन् । आफ्नै प्राणप्रिय अर्जुनको प्रहारबाट उनी लडेका हुन्, ईच्छा मृत्युका वरदान पाएका उनी आफ्नै ईच्छाले मात्र देहत्याग गर्न सक्नेछन् । भिष्मपितामह उत्तरायण तिथीको प्रतिक्षामा जीवनत्याग गर्ने सोचमा छन्, युधिष्ठिरलाई कृष्णले भिष्मपितामहको आशिष लिन आग्रह गर्दछन् । कृष्णका अनुसार अुर्जनका लागि पितासमानका सबैभन्दा ठूला र आदरणीय भीष्म पितामह नै हुन् ।
भिष्मको युधिष्ठिरलाई दिइएको दिव्य ज्ञान महाभारतको अनुस्सना पर्वमा रहेको छ । निकै बेर जीजन ज्ञान र धर्मका विषयमा वाणको शैयामा रहेका भीष्म संग युधिष्ठिरको वार्ता हुन्छ । युधिष्ठिरले भीष्म पितामहलाई विश्वमा सर्वाधिक ठुलो पुण्य कमाउने धर्म हुन हो भनी प्रश्न गर्दछन् । आज भीष्म पितामहको उत्तर यहाँ प्रस्तुत गर्न चाह्यौं ।
भीष्म पितामहले भगवान कृष्ण नै सबैभन्दा ठुलो धर्म रहेको बताँउदछन् ।
बिष्णु सशस्त्रानामका बिष्णुका नामहरु उच्चारण गर्दै भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई बिष्णुका अवतार कृष्णलाई नै सर्वाधिक ठूला धर्म, पुण्य, मोक्ष अनि भगवानतत्वका रुपमा ब्याख्या गर्दछन् । कृष्णलाई यहाँनेर नाम भन्दा पनि विशेषण र बिष्णुनिकट गुण र अवतारका रुपमा लिइन जरुरी रहन्छ । कृष्ण एउटा मान्छे या चरित्र मात्र नभएर गुणहरु हुन्, कृष्णका गुणहरु सर्वोच्च मानवताका दृष्टान्त हुन् ।
युधिष्ठिरले सोधेको एउटा प्रश्न यहाँ प्रस्तुत छ ।
उनी प्रश्न गर्दछन् कि के कुनै परिस्थितीका लागि राजा जिम्मेवार हुन्छन् या समयले राजालाई अवस्था अनुसार बनाँउदछ ? महाभारतको युद्ध र नरसंहरको प्रतिउत्तरमा धर्मराज युधिष्ठिरले यस प्रश्न सोधेका हुन् । यहाँनेर भीष्मपितामहले निसंकोच महाभारतको सम्पूर्ण अवस्थाका लागि समयलाई नभई राजालाई दोष दिन्छन् । राजा र नेतृत्वको असमर्थताले नरसंहार र बिनाश निम्त्याउने संभवनाको दिशा भिष्मका अन्तिम शब्दहरुमा छन् । महाभारतको शान्ति पर्वको ६९ र ७० मा पढ्न सकिन्छ । नेपालमा पनि नेतृत्वका यथेष्ट कमजोरी र लालसाहरु छन्, के हामी समृद्ध हुनलाई नागरीक चेतनाका साथसाथै नेतृत्व चेतना पनि उतिकै आवश्यक छ भनी महाभारतले उदृत गर्दछ त ?
सहि नेतृत्व जीवनका हरेक पलमा आवश्यक रहन्छ । बिकास र बिनाश नेतृत्व र आत्मसाथ गरेको दर्शनको प्रतिफल हो ।
जीवनका नियमहरुः शास्त्रार्थ
रानी ऐश्वर्यको पहिलो जनपत्र
इरानको वर्तमान अवस्थाबारे इरानका पूर्व राजकुमार के भन्छन?
पश्चिमी न्यूनचापीय वायुका कारण वर्षा लम्बियो, सोमवारबाट मौसममा सुधार हुने
काठमाण्डौ धोबिघाटमा दुर्धटना
“नेपाल सम्वत्” तथा “म्ह पूजा” धूमधामका साथ सम्पन्न
आफ्नै विवाह समारोहमा जीनुको ‘आभास’ सार्वजनिक
गुगलमा लिपुलेक कहाँ छ ? सक्दो शेयर गरौं
सीताको निधनः तथ्य र कविता